Madaxweyne Farmaajo oo kulan la yeeshay xubno ka socda xildhibaanada taageersan guddoomiye Jawaari - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMadaxweyne Farmaajo oo kulan la yeeshay xubno ka socda xildhibaanada taageersan guddoomiye Jawaari
April 7, 2018 Puntland Mirror Somalia 0
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. [Sawirka]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta oo Sabti ah Muqdisho kulan kula yeeshay xildhibaano taageersan guddoomiye Maxamed Shiikh Cusmaan Jawaari, sida ilo-wareed kulanka ka ag dhow uu warbaahinta u sheegay.
Madaxweynaha iyo xildhibaanada ayaa ka wadahadlay sidii loo xalin lahaa khilaafka u dhaxeeya baarlamaanka iyo golaha wasiiradda, sida ilo-wareedku sheegay.
Xildhibaanada la kulmay madaxweynaha ayaa la sheegay in ay ka koobnaayeen toddobo xubnood, kuwaasoo Jawaari uu soo dhisay sidii ay xal ugu raadin lahaayeen khilaafka jira.
Mooshinka ka dhanka ah Jawaari ayaa waxaa dabada ka riixaya xubno xildhibaano ah oo katirsan xukuumadda Xasan Cali Khayre.